Filohan’ny Antenimierampirena : “Aretin-dratsy ary mora fehezina ny pesta” | NewsMada
Filohan’ny Antenimierampirena : “Aretin-dratsy ary mora fehezina ny pesta”
“Na aretina tsotra sy azo sitranina tsara aza ny pesta, mety mamono ao anatin’ny fotoana fohy koa raha tsy voatsabo haingana. Aretin-dratsy ary mora fehezina ny pesta, raha manaraka ny toromariky ny mpitsabo isika. Raha vao misy ny mampiahiahy, manatona ny toeram-pitsaboana.”
Io ny nambaran’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Rakotomamonjy Jean-Max, nanomboka ny fivoriana ara-potoana faharoa, eny Tsimbazaza, omaly. Manainga ny rehetra mba ho tony hatrany izy. Tsy misy raharaha ho vanona ao anatin’ny fisavoritahana. Tokony hatao laharam-pahamehana eto amin’ny firenena ny famongorana tanteraka ny aretina. Mba hiara-mientana ny rehetra… Henatra ho an’ny firenena io aretina io.
Mandany fotoana ny fifanomezan-tsiny
Fotoana lany amin’ny famongorana ny aretina ny fifanomezan-tsiny sy ny fifanilihana andraikitra. Azo eritreretina ny fampijoroana tahirim-bola manokana ho amin’ny fanadiovana maharitra. Ilaina ny hamongorana haingana ny valanaretina, fa misy fiantraikany amin’ny fianaran’ny mpianatra.
Fotoana izao hanamafisana ny fifanentanana amin’ny fitandroana ny fahadiovan’ny tanàna.Tsy raharahan’ny fanjakana samy irery izany, fa mitaky fahatsiarovan-tena sy fandraisana andraikitry ny isam-batan’olona.
Aleo handeha ny adihevitra momba ny lalàmpanorenana
“Aleo hisy ny adihevitra, ary samia mandray anjara”, hoy izy momba ny fanitsiana ny lalàmpanorenana. Misy ny fepetra arahina raha misy ny fanitsiana na fanovana tiana hatao. Mifandresy lahatra amin’ny alalan’ny porofon-kevitra mafonja, manandratra hatrany ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny vahoaka. Tsy mitera-boka-tsoa ny fanapahan-kevitra amin’ny fitanilana bontolo.
Vao mainka mihamahery vaika ny asan-dahalo
Be ny ezaky ny fanjakana amin’ny fiahiana ny filaminana sy fandriampahalemana, nefa mbola manjaka ary vao mainka mihamahery vaika ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy. Na any ambanivohitra izany na an-tanàn-dehibe. Tsy misy tsy mikaikaika ny vahoaka…
“Fototra nahatonga ny krizy mifanesy sy nanimba zavatra maro ary nanimba ny toe-tsaintsika ny tendrim-po tsy mba namana”, hoy kosa izy momba ny fampihavanam-pirenena . Ny tsy miady olom-bodo, fa izay to fo mamosavy. Natao ho fanamby ny hampahomby ny fampihavanam-pirenena.
Hifantoka amin’ny fandinihana sy fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana, taona 2018, izao fivoriana izao.